ငရဲ ရှိသည်ကို အတည်ပြုကြပြီ .. « MMWeather Information BLOG
« နေပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေ နေပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင် »
ငရဲ ရှိသည်ကို အတည်ပြုကြပြီ ..
By heronaing, on February 10th, 2011
ငရဲ ရှိသည်ကို အတည်ပြုကြပြီ…
ဒါပေမဲ့ မကြာပါဘူး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးထားတဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံမှ စာတန်းကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့ အခါမှာတော့ သူဟာ အရမ်းအံ့သြတုန်လှုပ် မိပါကြောင်းနှင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့ ကို ဘုရားသခင်ထံမှာ
ကျမ်းည္မန်း။ ။အကုသိုလ်နှင့် ငရဲပြည်ဟူသော စာအုပ်မှ ဘာသာပြန်သူ ဘကြီးဇင် ရေးသားသော စာအုပ်မှဖြစ်ပါသည်။
လွမ်းခြင်း၏ တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာ နေသာနေတဲ့ နေ့တစ်နေ့ရှိသည်။မှတ်ချက်။ ။ ဒါကတော့ မေလ်းထဲက တွေ့ တာပေါ့နော်။ အသံဖိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ပို့ ပေးတဲ့ သူက အသံဖိုင် အတိုလေးပဲ ပို့ ပေးတာပါတဲ့ ။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့် ပါ။ ကျွန်တော် မူရင်း အတိုင်း ပြန်တင်ပေးထားတာပါခင်ဗျ။ အသံဖိုင် ပို့လိုက်ပါတယ် ….
အသံဖိုင်က သိပ်မရှည်ပါဘူး … တိုတိုလေးပါ …
၁ မိနစ်နီးပါးလောက်ပဲကြာပါတယ် …
ရေဒီယို ထုတ်လွင့်ချက်က အသံကို ပြန်ကူးထားတာပါ …
ကျွန်တော့်အသိတစ်ယောက်ဆီမှာတော့ မူရင်းအသံဖိုင်ရှိပါတယ် … အသံက ၁၀ မိနစ်လောက်ကြာတယ်လို့ ပြောပါတယ် …
ကျွန်တော်လည်း သူ့ဆီက ဖိုင်ကို လိုချင်ပါတယ် …
၁၀ မိနစ်လောက်ဆိုတော့ သေသေချာချာ နားထောင် သုံးသပ်လို့ရနိုင်ပါတယ် …
ခက်တာက ကျွန်တော်လည်း အဲဒီအသိနဲ့ မတွေ့တော့ဘူး …
အင်တာနက်မှာလည်း မူရင်းအသံဖိုင် လုံးဝရှာလို့မရဘူး ….
ကျွန်တော် ကြိုးစာရှာကြည့် ပေမယ့်လည်း အခုကျွန်တော်ပို့တဲ့ ဟာလိုမျိုး အသံဖိုင် အတိုပဲ ရှာလို့ရပါတယ် ၊ အသံဖိုင် အရှည်များ ရှာလို့ရရင် ပြန်ဝေမျှကြပါဦး …
အခု အသံဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်ရင် အရင်ဆုံး ရေဒီယိုကြေငြာသူရဲ့ စကားသံကိုကြားရပါမယ် …
၁ မိနစ်လောက်နေမှ ငရဲမှ အော်ဟစ်သံကို ကြားရပါလိမ့်မယ် …
အသံတွေကတော့ လုံးထွေးနေပါတယ် … နားကြပ်နဲ့နားထောင်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် …
အမျိုးသမီးအော်ဟစ်နေတဲ့အသံကိုတော့ တစ်ချက်တစ်ချက်ကြားရပါတယ် …
ပြီးတော့ အသံဟိန်းဟိန်းနဲ့ ရယ်နေတဲ့အသံကိုလည်း ကြားရပါတယ် ..
ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီ ရယ်နေတဲ့အသံကို ငရဲသား က ရယ်နေတယ်လို့ထင်တာပဲ …
အသံဖိုင်ကိုတော့အောက်ပါလင့်မှာ ဒေါင်းပါ။
သိပ္ပံဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ, ဆောင်းပါး « နေပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေ နေပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင် »
« နေပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်နေ နေပေါက်ကွဲမှုတခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင် »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum